Top 5 webcam edekọ 2015
Webcams ndị kasị mma na ọkaibe ụzọ hụ na onye ọrụ na-akawanye na aka na ndị enyi na ndị òtù ezinụlọ na ala na afọ ojuju. Ọ bụ n'ihi otu ihe ahụ mere webcams dị ugbu a ihe akụkụ nke usoro a na-mepụtara na nke a. Ọ na-na--ahụ kwuru na webcams bụ mpụga nakwa iji jide n'aka na ndị na-akpata nke portability ẹnịm. Mgbe ọ na-abịa webcam ndekọ ha na-na-ahuta ka kasị mma na ndị ọkaibe ngwá ọrụ iji hụ na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma na mkpokọta nke nke video ndekọ a na-egbo. Na a nkuzi n'elu 5 webcam ndekọ maka afọ 2015 ga-kwuru iji jide n'aka na onye ọrụ na-akawanye oke na ndị kasị mma bụ họọrọ ka gaba n'ihu.
Gịnị mere Kamera ndekọ?
E nwere ọtụtụ ihe ndị na-na-metụtara webcam ndekọ dị ka ha na-eji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe N'ihi mgbe ọ na-abịa na-echebekwa ndị izi videos na ndị ọzọ na mbipụta na-na-kpebiri na nke a. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịkwara ime ka n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe ngwá ọrụ na-eji na nke a iji hụ na video àgwà bụghị nanị dị elu ma onye ọrụ ọkọkpọhi ndị kasị mma na ala nke nkà na ya apụta mgbe ọ na-abịa na-ebufe video.
Taa webcams na-mepụtara na China bụ nke kacha mma mma na price bụkwa ezi uche otú iji pụọ na ihe dị na otu onye bụ uche na-adịghị dị ka otu technology na elu ọrụ a na-awa site China otú ọ na-gwara iji jide n'aka na Chinese mere kam na-nyere mkpa ruru ezi N'ihi na ogologo ndụ.
Uru nke webcam edekọ omume
Ka e kwuru tupu nakwa na e nwere ọtụtụ ihe ndị na-na-metụtara a onu na maka otu ihe ahụ ọ bụ-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị na-esonụ ihe na-nọ na n'uche ka ha bụ uru nke na-eji na webcam omume na ala na afọ ojuju:
Top 5 Best webcam ndekọ 2015
Nke a bụ isi akụkụ nke a nkuzi ga-eme ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe N'ihi mgbe ọ na-abịa webcam edekọ na yiri ngwọta iji jide n'aka na ihe kasị mma e nyere ka usoro dị ka mma. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịkwara ime ka n'aka na otú ndepụta ekwesịghị-atụle ka ikpeazụ na ndị ọzọ ndekọ kwesịkwara ịchọgharịrị na-achọgharị maka online iji jide n'aka na arụpụta ihe kasị mma na-enwetara na onye ọrụ na-ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe ịkpata nke a.
1. EatCam Kamera edekọ
Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma ndekọ iji jide n'aka na onye ọrụ na-ọkọkpọhi edezi ọrụ na e agbakwunyere n'ime usoro ihe omume nke mere na kasị mma na ndị ọkaibe N'ihi na-enwetara n'ime oge ọ bụla ma ọlị. Ọ bụkwa otu nke kasị mma na ndị kasị elu omume na emewo akpa ebe ke ndepụta ruru ka sophistication na ọ na-enye onye ọrụ na mmekọrita ndekọ na-edezi abụọ.
2. Wondershare video edekọ
Nke a bụkwa otu n'ime ihe ndị kasị ọkaibe omume na ike idekọ bụghị naanị webcam videos ma ọ bụla video na na-egwuri na internet na maka otu ihe ahụ ọ na-ahuta ka kasị mma na ndị ọkaibe omume nke ga-ọ bụghị nanị na-eme ka n'aka na video e dekọrọ na HD ma na metụtara convertor ga-emekwa ka n'aka na video converted ka format ọrụ ọchịchọ ahụ enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Ọ bụ ya mere otu nke kasị mma na ọkaibe ngwaọrụ na nke a.
Nke a na usoro bụ ihe kasị mma na-eme ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi results na-na akara na chọrọ. Otu n'ime ndị isi atụmatụ nke cam bụ na ọ na-abịa na a ngụ oge, ya mere ọ nwere ike kwụsịrị ma malitere ka ma ọ bụrụ na onye ọrụ bụ efep cam n'ihi na ụfọdụ oge nke oge na ọrụ a bụghị e agbakwunyere na ihe ọ bụla nke na omume na- na-kwuru na ndepụta nnọọ.
4. Free 2X webcam edekọ
Nke a na usoro nwere ọtụtụ anụ femụwe n'ime ndepụta na e kwuru na ya mere ọ na-ukwuu-atụ aro ka ndị na-ọrụ na-achọ ijide n'aka na nsonaazụ kacha mma na-enwetara ma ọ bụ ha bụ ndị na-eji nke a ụdị omume na a ọkachamara larịị.
5. mpụta mbụ video kpọọ
Ọ bụ a n'ikuku ana enweta n'otutu ọtọ omume nke na-eme n'aka na ndekọ a na-eme si webcam, ihuenyo nakwa dị ka ọdịyo na ngwaọrụ na onye ọrụ chọrọ iji na nke a. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịkwara ime ka n'aka na usoro ihe omume a na-anwale juputara tupu ọ na-ebudatara iji jide n'aka na arụpụta ihe kasị mma na-enwetara na nke a.
> Resource> Record> Best webcam edekọ 2015